Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho
Waxaa habeenkii xalay Isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho ku geeriyooday Allaha u naxariistee Saciid Xasan Geedi oo ka mid ahaa xildhibaanada kasoo jeeda deegaanada gobolada waqooyi u matalaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Xildhibaanka ayaa la sheegayaa in muddooyinkii ugu dambeysay uu la xanuunsanayay cudurka dhiig-karka, waxaana geeridiisa saxaafadda u xaqiijiyay xoghayaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya C/kariim Xaaji Cabdi Buux .
Allaha u naxariistee xildhibaan Saciid Xasan Geedi ayaa baarlamaanka Soomaaliya kusoo biiray sanadkii 2012-ka, wuxuuna ka mid ahaa xildhibaanadii dhawaan lagu soo doortay magaalada Muqdisho.
Xildhibaanka geeriyooday ayaa ahaa xildhibaanka kaliya ee ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ee aan codkiisa ka dhiiban doorashadii dhacday 8-da bishaan Febraayo, kaas oo lagu soo doortay madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.
Waa xildhibaankii labaad ee ka geeriyooda baarlamaaanka cusub ee Soomaaliya, iyadoona uu hore u geeriyooday xildhibaan lagu soo doortay magaalada Garoowe, kaas oo geeriyooday maalmo kadib markii uu xanuun kusoo booday, waxaana kursigii uu ka geeriyooday lagu badelay nin walaalkiis ah.